Wararka - Maxaa loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho habka loo isticmaalayo dharka aluminium ee ku jira insula-da banaanka
Aluminiumka aluminium ee dabka u adkaysta dabka ayaa sidoo kale loogu yeedhi karaa fiber dhoobada iyo aluminium silicate fiber. Faytarka dhoobada ayaa ah wakiilka ugu weyn ee fiber-dabka u adkaysta macno balaaran, kaas oo ah magaca guud ee alumina, silica, aluminium silicate iyo zirconia fiber u adkaysta dabka. Dhanka kale, fiber-ka u adkaysta dabka sidoo kale waxaa ku jira fiber kaarboon, fiber nitride, fiber boride iyo fiber aan oksaydh lahayn. Dareen cidhiidhi ah, kaliya aluminium silicate ayaa dhalaaliya ama la oksijiyey Kaliya fiberka leh sol fibrosis ayaa laga dhigi karaa fiber dhoobada.
Feejignaanta dharka aluminium aluminium ee geeddi socodka lakabka dahaarka dibadda:
1. Dhumucda lakabka dahaarka dibedda: qiimaha xaddiga isku dheelitirka kuleylka ee heerka naqshadeynta keydinta tamarta ayaa ah shuruudaha ugu yar ee heerka, buundada kuleylka maxalliga ahna waa in laga fogaadaa. Marka sheyga nidaamka dahaarka dibedda ee ka samaysan birta mesh silig bir ah oo walxo isku dhafan la isticmaalo, dhumucda lagama maarmaanka u ah lakabka dahaarka waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo natiijooyinka cabbirka dhabta ah. Si loo yareeyo wareejinta kuleylka iyo isticmaalka kuleylka ee darbiga, ma aha oo kaliya in la kordhiyo dhumucda lakabka dahaarka. Boqortooyada Midowday (UK) waxay tixgelinaysaa dahaadhka, daboolka iyo cidhiidhiga hawada guud ahaan.
2. Waxqabadka dahaadhka bannaanka: In kasta oo daboolku leeyahay waxyeello dabeed gaar ah, haddana uma sinnaana kuleylka kuleylka, gaar ahaan xagaaga kulul iyo meelaha qabow. Ka sokow isbeddelka kuleylka cimilada, waxqabadka kuleylka kuleylka waa in la tixgeliyaa waana in la xoojiyaa tallaabooyinka.
3. Nidaam kasta oo dahaadhku wuxuu ka kooban yahay wax soo saar nidaam ah, iyo waxqabadka farsamo ee qayb kasta oo ka mid ah maaddooyinka waa inay la kulmaan heerarka ku habboon. Darbiga dahaarka dibedda waa in lagu dhejiyaa darbiga si uu u sameysmo. Sidaa darteed, waxqabadka nidaamka waa in si buuxda loo tixgeliyaa, maxaa yeelay waxay xambaarsantahay arrimo kala duwan oo bannaanka ah waxayna buuxisaa shuruudaha kuleylka kuleylka.
Xagga sare waa taxaddarrada dharka aluminium ee aluminium ee habka loo adeegsanayo lakabka dahaarka dibadda. Guud ahaan, mid kastaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah. Waxaan ku shaqeyn karnaa hadba xaaladahooda. Waxaan rajeynayaa in qodobkaan kaa caawin karo.